Ikhaya AMAZINGA AFRIKA I-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu ku-Twitter
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlali Webhola waseNigeria onegama elithi “Vic“. Indaba yethu yeVictor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila nokukhuphuka kukaVictor Osimhen. Ama-Image Credits: I-Vanguard, NigerianNewsDirect ne-Twitter
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungubani umgadli onethalente elikhulu iso ngokushaya amagoli amahle. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-biography kaVictor Osimhen ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, amagama akhe aphelele nguVictor James Osimhen. UVictor Osimhen njengoba ayevame ukubiza njalo wazalwa Usuku lwe-29th lukaDisemba 1998 kunina nobaba wakhe ongasekho, uMdala uPatrick Osimhen edolobheni laseLagos, eNigeria. Wayengowokugcina ezinganeni eziyisithupha azalelwa abazali bakhe abathandekayo ababoniswe ngezansi.
UVictor Osimhen Bazali- Ubaba wakhe- Umdala Partick & Umama ongasekho. Isikweletu Sezithombe: NigerianNewsDirect ne-IG
Abazali bakaVictor banemindeni yabo abavela eSouthern Nigeria ngokuqondile endaweni eyi-Esan South East Local Area of ​​Edo State eNigeria. Izibongo zomndeni wakhe okuyi-Osimhen”Kusho 'UNkulunkulu ulungile'ngolimi lwendabuko lwamaIshan.
Njengabadlali abaningi abaphawuleka eSouth Nigeria, uVictor Osimhen wayevela emndenini ompofu. Ngaphambi kokuba azalwe, abazali bakhe bathatha isinqumo sokuphindela edolobheni “Lagos”Inhlokodolobha yezomnotho eNigeria. Noma ngenkathi eseLagos, lo mndeni wabhekana nobunzima, obabunamandla kangangokuba uVictor omncane, owayesengumntwana omncane, wabhekana nelanga elishisayo kwitrafikhi yaseLagos lapho umama wayedayisa khona amanzi esachet ukwengeza imali ayitholayo.
UVictor Osimhen wakhulela eceleni komfowabo u-Andrew no-4 ezinye izingane zakubo e-Olusosun, a umphakathi omncane ezizungeze i-Oregun, Ikeja, Lagos. Lo mphakathi uhlalisa enye yezindawo zokulahla inqwaba e-Afrika. Ekhula esakhula iminyaka yakhe, uVictor Osimhen wahlikihla futhi wathela amanzi e-sachet nezinye izinto zasendlini ezitaladini ukuze aqongelele imali yokufunda kanye nokusinda komndeni. (I-TheNationOnlineng Imibiko).
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Isikole i-Olusosun Primary School asifunda sasebenza njengendawo yokuhlangana yebhola kubo bonke abafundi besikole kanye nentsha emphakathini.
Isikole samabanga aphansi i-Olusosun- Lapho uhambo lwebhola lwaqala khona. Isikweletu: I-LagosSchoolsOnline
Njalo kusihlwa, abafana abaningi kubandakanya noVictor baya enkundleni yezemidlalo bayobuka umfowabo omdala owayeyinkanyezi yebhola lendawo emphakathini. Izibulo lomndeni wokuqala ogama lakhe lingu-Andrew layeka imfundo yakhe ukuze ezothola imali ukuze anakekele uVictor nezinye izingane zakubo.
Njengomsakazi we-hawides, uVictor wafunda ukudlala ibhola ngokubonga kumfowabo omdala, u-Andrew. Wayenesifiso esikhulu neChelsea FC njengoba ebuka iqembu lidlala ezikhungweni zokubukwa. Yena kanye namalungu omndeni wakhe babengabalandeli abakhulu beqembu laseNigeria (Super Eagles). Ukuxhaswa kweqembu kanye nothando lwalo lokudlala lo mdlalo kudale isifiso sokuba uchwepheshe.
Ngokubona ukuthi umfowabo omncane wayenekhono ngokwengeziwe, u-Andrew kwadingeka awushiye lo mdlalo ukuze abhekane nebhizinisi lakhe lephephandaba. Ubuye futhi walahla umqondo wokuqhubekisela phambili imfundo yakhe ukuze akwazi ukukhulisa imali yokusiza umfowabo omncane amkhulisa ukuba abe yinkanyezi.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuthi iphupho lomndeni liqale ukukhokha njengoba abaseshi bebhola endawo bebona okuthile okukhethekile ngoVictor base bemmemela e-Ulitmate Strikers Academy eLagos lapho aqala khona ukuphumelela.
Ngonyaka we-2014, ukusebenza kukaVictor Osimhen ne-Ultimate Strikers kumbona emenywa yi-coach Amuneke ukumela izwe lakhe iqembu le-U-17. Qaphela: Iqembu lesizwe laseNigeria i-U-17 lebhola elaziwa ngeGolden Eaglets, yiqembu elincane kunazo zonke elimele izwe laseNigeria ebholeni. UVictor Osimhen waba nesandla ekusizeni iqembu ukuba lilungele I-U-17 FIFA World Cup ebibanjelwe eChile.
Umncintiswano we-2015 FIFA U-17: Victor U-Osimhen waba nesiqalo esihle kulo mqhudelwano njengoba eshaya amagoli amabili amakhulu kulokhu, ewina izigidi zezinhliziyo kufaka phakathi ama-European scouts azungeze izwi. U-Osimhen ubaluleke kakhulu empumelelweni yeNi-17 yaseNigeria kwiNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA eChile. U-Asides esiza izwe lakhe ukunqoba lo mncintiswano, umNigeria oneziphiwo waphinde wafaka umklomelo wegoli eliphezulu kakhulu ngemuva kokushaya amagoli e-10 kanye neFIFA U-17 World Cup yesiliva yeNdebe Yomhlaba.
UVictor Osimhen uthola ithuba leFIFA U-17 yakhe yeNdebe Yomhlaba yeGolide neSiliva Ball. Amakhredithi: Jumia futhi Amakhulu
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Ngemuva kweNdebe Yomhlaba, kwavezwa ukuthi amakilabhu amakhulu aqhamuka e-Europe, ukuthandwa kwe-Arsenal, Man City, neTottenham Hotspur, kwaba ngemuva kwemisebenzi yakhe. Ngokuthusa, uVictor Osimhen wenqabile konke ukunikezwa ngoba enye iklabhu enesisindo esiphakathi yayimnikeze imali enkulu kunazo zonke.
Ngemuva kwesikhashana eqanjwe igama lokuthi yi-2015 African Youth Player of the Year kumaCAF Awards e-Abuja ngoJanuwari 2016, u-Osimhen umemezele umhlaba wonke ukuthi uzolandela umsebenzi wakhe wobuchwepheshe nekilabhu yaseJalimane iBundesliga, eWolfsburg. Ngokusho kwakhe, iziqiniseko zeqembu kanye nezimali ebezingekho zikhulisa umndeni wakhe kakhulu nokuthi ukhetha ukudlalela iqembu laseJalimane hhayi noma ngabe yiliphi iqembu laseYurophu.
I-Agony eJalimane: U-Osimhen usayine isivumelwano seminyaka emithathu nesigamu sokugcina kuze kube ngoJuni 2020 futhi wenza umthwalo wakhe wendiza ephezulu yaseJalimane ngoMeyi 2017. Ngemuva nje kwezinyanga ezine zokwenza i-Bundesliga yakhe yokuqala, izinkathazo zaqala ukulayisha eNigeria. Ukulimala ehlombe kwamenza wangena ohlinzeni okwamenza waqeda isizini ngaphambi kokuqala kwesizini yakhe. Ukuqeda kuleli zinga elimpofu, uVictor Osimhen (ofanekiselwa ngezansi) waba ongaziwa kakhulu yiklabhu ephezulu.
UVictor Osimhen ubukeka enethemba njengoba alwa nokulimala nokugula eJalimane. Umthombo we-Twitter.
Amaphupho wobusuku obu-Osimhen aqhubeka ngemuva kokululama ekulimaleni kwakhe ehlombe. Ngalesi sikhathi, ukugula obekuthatha isikhathi eside, kumenze waphuthelwa isizini yokuqala futhi kubuhlungu kakhulu, aphuthelwa yizindebe zomhlaba wonke weNigeria ze2018. Uthi bewazi?… Wayesesibhedlela ngesikhathi seNdebe Yomhlaba wonke yaseRussia i-2018 FIFA.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Kuthathe u-Osimhen mayelana nezinkathi ezibuhlungu ze-2 ukuphuma kwamaphupho akhe amabi. Ukungahambisani ngenxa yokulimala nokugula kumbone eshaya amagoli angu-zero (0) eWolfsburg ngaleyo ndlela konakalisa umsebenzi wakhe kule nqubo.
Ukuqhubekela phambili, u-Osimhen wenza umqondo wakhe wokuya ezivivinyweni zasehlobo namakilabhu aseBelgium uZulte Waregem noClub Brugge, ngaleso sikhathi ababengabanqobi. QAPHELA, Impilo yakhe yafika phansi njengoba egula umalaleveva owathinta isimo sakhe somzimba nokwenze ukuthi womabili amakilabhu amenqabe.
Ku-22 Agasti 2018 usuku okwaba ngalo onkulunkulu bebhola waba nesihe kuye. Kwakuwusuku iklabhu yaseBelgian uCharleroi eyamemukela ngayo kwisivumelwano semalimboleko eside. UVictor Osimhen wenza idokhumenti lakhe eliphelele ku-22 Septhemba, eshaya igoli lakhe lokuqala njengochwepheshe nge-backheel. Ngemuva komdlalo, u-Osimhen utshele I-BBC Sport ukuthi wayenayowabuye wayithola injabulo yakhe ngemuva kokulinda isikhathi eside".
UVictor Osimhen wagcina etholile injabulo yakhe ngemuva kokulinda isikhathi eside. Ikhredithi ku- Injongo
Isiguli saseNigeria sabekezelela siphumelela ngohlangothi lwaseBelgian, sidlala imidlalo ye-36 futhi sathola amagoli we-20, i-feat eyenze iklabhu yakhe, uCharleroi, yavula inketho yabo yokumthola ngenkathi ebolekwe. Ngemuva kokubusa ibhola eBelgium, umNigeria wazibona sekuyisikhathi esifanele sokuthi abuyele emuva njengomgadli oholayo wase-Afrika ayekade eyiye. NgoJulayi 2019, wenza into ebheke phezulu emsebenzini wakhe ngokusayinela iLille OSC.
UVictor Osimhen Rise to Fame Story. Isikweletu Sezithombe: Injongo
Esikhundleni sokukhubazeka ngenxa yokulimala kwamahlombe kanye nomalaleveva, umgadli waseNigeria wakhula esuka emandleni waya emandleni, ekhuthazelela ukunyuka kwesibhakabhaka kuya ekuveleni ukuze abe ukuvelela QAPHELA, enye yezindawo ezishisa kakhulu zebhola e-Afrika. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo e-Europe, kuqinisekile ukuthi abalandeli abaningi bebezobuza ukuthi ngabe uVictor Osimhen, njengamanje ngesikhathi sokubhala, unentombi yini.
UVictor Osimhen Ntombi Yomuntu? Isikweletu Sezithombe: IG
Akunakuphikwa iqiniso lokuthi izimfanelo ezithandekayo zika-Osimhen kufaka phakathi ukugqama, ukwethembeka, ukuzikhandla nokuthobeka ngeke kwenze abantu besifazane bakholwe ukuthi uzokwenza isoka elingcono.
Ngaphambi kokuthi adume, kusolwa ukuthi u-Oshimen wayethandana nentombazane enhle ayibiza ngegama elithi Sbusiso. Ngesikhathi sokuhlangana kwabo, bobabili abathandi babehlanganyela izithombe zabanye ku-Instagram. Ubudlelwano okusolwa ukuthi u-Osimhen nentombi yakhe buye babonakala emphakathini cishe iminyaka eyi-2 ngaphambi kokuthatha isinqumo sokumsusa emlandweni wabo bonke abasebenza naye kwezokuxhumana.
UVictor Osimhen Ntombi
Kusukela ngemuva kokuchithwa kwemininingwane yakhe ezinkundleni zokuxhumana, amahlebezi aqhubeka ekhona, athi uSibusiso wayengeyona intombi ka-Osimhen kodwa unkosikazi wakhe owayethunjiwe. Ukuhlola ukuphatha kwakhe ezokuxhumana, akukho lwazi ngomshado wakhe noma umshado wakhe okusolakala ukuthi wawubusisa. Noma kunjalo, kusenokwenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi ushade naye kodwa akhethe ukungawenzi obala.
Njengasikhathi sokubhala, u-Osimhen ubukeka engashadile futhi uncamela ukugxila emsebenzini wakhe kunokufuna intombi noma ukwenza ubuhlobo bakhe nomphakathi.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi uVictor Osimhen Impilo yomuntu siqu kude nebhola kuzokusiza uthole isithombe esingcono somuntu wakhe. Ukuqala, ungumuntu owazi okushiwo yangempela kokulondolozwa nokuphikelela, umyalezo ohlala uhlala ekhasini lakhe lephrofayili yeWhatsapp.
"Angizange ngiphazanyiswe nganoma iyiphi indlela eminye imibono engemihle nezinto ezazibhalwe ngami ngesikhathi sami eWolfsburg,”. Futhi, ngala mazwi akhe, ungayenga kalula ukuthi ungumlobi.
Ngaphandle kwebhola likanobhutshuzwayo, u-Osimhen uthanda ukulalela umculo we-R&B ngomculo awuthandayo osasele "Ngikholwa ukuthi ngiyakwazi ukundiza", Isihlabathi somculo esishaywayo ngomculo womculo R Kelly. Kwesinye isikhathi, ucula ingoma kaKelly ngendlela yakhe ngesikhathi semigubho yegoli yakhe. Endaweni yomculo waseNigeria wendawo, u-Osimhen unamathela no-Olamide futhi ithrekhi yakhe ayithandayo evela kumculi we-hip-hop waseNigeria ngu 'uhleli esihlalweni sobukhosi '.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
UVictor Osimhen, ophakela ukondla umndeni wakhe ujabule kakhulu ngokuthola indlela yomndeni wakhe eya enkulungweni yezezimali konke kubonga ebholeni. Onke amalungu omndeni (njengoba kubonwe ngezansi) abebemi ngakuye ngezikhathi zobumnyama okwamanje bathokozela abakhulekeli abagcwele abalelwa yibhola lobuchwepheshe.
Amalungu omndeni kaVictor Osimhen. Isikweletu kwiNigerianNewsDirect
NgoYise KaVictor Osimhen: UPa Patrick Osimhen ungumzali osindile nobaba wemvelo kaVictor Osimhen. Wake waba ngumphathi wendodana yakhe kuze kube yi2015 lapho enikeza umthwalo wokuphatha kwi-ejenti yaseFrance u-Oliver Noah weNoga Sports Management.
Ubaba kaVictor Osimhen (wesibili kusuka kwesokudla), indodana yakhe neqembu likaNoga Sports Management. Ikhredithi ku- I-AllNigeriaSoccer
Ngenkathi uPatrick Osimhen engunogada osemthethweni wendodana yakhe, waba nezingqinamba namanye ama-ejenti azama ukumdlula ethubeni lokuthola imali ngokudluliselwa kwendodana yakhe eWolfsburg. Lezi ziqu zabantu ngenkathi bezama ukumdlula, bakhetha ukubhekana nendodana yakhe yokuqala, u-Andrew Osimhen ngaphezulu kwezingxoxo zokubonisana noVictor Osimhen.
Mayelana Umama kaVictor Osimhen: Ngokwemibiko, kuvela ukuthi umama kaVictor Osimhen usephuzile. Lo mgadli waseNigeria njengangesikhathi sokubhala uhlonipha umama wakhe ngokuba nesithombe sakhe njengesithombe sakhe sephrofayili ku-akhawunti yakhe ye-instagram.
Umama kaVictor Osimhen. Isikweletu ku-Instagram
UVictor Osimhnen Siblings: UVictor unabazakwabo abayisithupha sebebonke futhi u-Andrew Osimhen uthandwa kakhulu kunabo bonke abafowabo. Uthando lukaVictor Osimhen kodadewabo alunamingcele. Uthi bewazi?… Wake wanikezela Umklomelo wakhe weGolden Boot Award komunye udadewabo ngemuva kokubeletha ingane yentombazane ngesikhathi nje esathola umklomelo, cishe ngoNovemba 2015.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Njengasikhathi sokubhala, inani lemakethe likaVictor Osimhen lenyuka ngenhla kwe-13,00 mil. € ngokusho Dlulisa Imakethe. Njengoba kuqashelwa ngesiphathi sakhe semidiya yokuxhumana nabantu, lokhu kuholela emiholweni yezindlela ezinhle zokuphila impilo yobukhazikhazi ephawuleka kalula ngezimoto ezihehayo, izindawo ezihlala abantu kanye kwesinye isikhathi, amantombazane.
UVictor Osimhen uphila Indlela elula. Isikweletu ku-Instagram
Uma ubheka emuva ekukhulisweni kwakhe okunomdlandla kanye nemvelaphi yomndeni ompofu, kuqinisekile ukuthi u-Osimhen kufanele abe nesisekelo futhi kufanele azi ukuthi angaziphatha kanjani imali yakhe.
Amaqiniso we-Victor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Isiphithiphithi Somndeni: Ikusasa likaVictor Osimhen lalike lahlakazeka ngemuva kwenhlekelele yomndeni ngokudluliselwa kwakhe. Amalungu omndeni wakhe abephikisanayo ngokuthi ngubani okufanele amele umdlali.
Ngokwemibiko eku-inthanethi, umalume ka-Osimhen, uMichael, wake wahola iqembu lama-ejenti ngenkathi u-Andrew, umphathi wakhe omkhulu weqembu. Womabili la maqembu ayenabameli bawo ababelwela ukudluliswa kwemali namalungelo okuyiqiniso okumelela umdlali. Usizi lomndeni luthole okusha lapho kuvela imibiko kwabezindaba yokuthi ubaba ka-Osimhen ushayiwe ngama-thugs ngenxa yokwenqaba kwakhe ukuvumela lo mdlali ukuthi ahambe eWolfsburg. Kamuva kwathiwa asiqanjelwe amanga. Kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba inkinga yomndeni iphele.
I-Lucky Nursery Nigerian Club: NgoJanuwari 1, 2017, uVictor Osimhen udluliselwe ku- $3,970,225 eklabhu yaseJalimane iVfL Wolfsburg evela ku-Ultimate Striker Academy, iklabhu yasendaweni eLagos.
Uthi bewazi?… Imali yokudlulisa yamenza waba ngomunye wabadlali ababiza kakhulu ukuthi asayinwe ngokuqondile eqenjini lezingane e-Afrika aye eqenjini eliphakeme lase-Europe. Ibala leli zinga lokushintshana njengangesikhathi sokubhala, i-Ultimate Strikers academy ithole isizumbulu semali engu-1.4 billion Naira kusuka kuVictor Osimhen ukudluliselwa.
Kungani ayesebenza eBelgium: Abantu abaningi baseNigeria bathanda ukuqala umsebenzi wabo wase-Europe e-Belgian First Division A. Le ligi ibiseMecca kubaqeqeshi bebhola laseNigeria eminyakeni edlule nokuyiyona enikeze uVictor Osimhen ukuphumelela kwakhe ebhola laseYurophu.
Uthi bewazi?… Umqeqeshi wokuqala wezinkozi zaseNigeria ongasekho emhlabeni uStephen Keshi okuholele ekutheni kususwe ithalente laseNigeria ukugcwalisa iBelgium kuma-1980 asemuva kwesikhathi. Ukuthandwa kukaDaniel Amokachi, uVictor Ikpeba, uSonto Oliseh no-Alloy Agu bonke baqale umsebenzi wabo eBelgium. Qaphela: bekuseBelgium uCelestine Babayaro awine umklomelo wakhe we-Ebony Shoe njengomdlali ohamba phambili wase-Afrika kwiligi yaseBelgium.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iVictor Osimhen Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Nigerian Football Diary
Kwangathi 10, 2019
Kwangathi 5, 2018